Iindaba - Ezolimo zexesha elizayo-ukukhanya kwe-horticulture yokukhanyisa
Ezolimo zexesha elizayo-ukukhanya kwe-shinon horticulture
Ngokuka-Technavio, iarhente yophando yentengiso, intengiso yehlabathi yezibane zokukhula kwezityalo izakugqitha i-3 yezigidigidi zeedola ngo-2020 kwaye iya kukhula kwinqanaba lokukhula ngonyaka eli-12% ngo-2020, oko kuthetha ukuba usetyenziso lwe-LED ekukhuleni kwezityalo lunentengiso enkulu enokubakho. Ngenxa yokunqongophala kwezixhobo zamandla kunye nokuncitshiswa komhlaba olimekayo, indima nemfuneko yeefektri zezityalo sele ibalasele ngakumbi - banokuwususa umhlaba kwaye bavelise iimveliso zezolimo ngakumbi ezinomhlaba ongalimiyo nobutyebi bamanzi. Ukukhanya kwe-horticulture yinxalenye ebalulekileyo yayo, isichumisi sokukhanya sisetyenzisiwe endaweni yezichumisi zemichiza, imithombo yokukhanya yokufakelwa iyasetyenziswa endaweni yelanga. Esi sisitshixo ekuphumezeni isivuno esiphezulu kunye nefektri yezityalo enobume bendalo.
Ukukhanya kwesiko ngokwamasiko kufezekiswa ikakhulu kusetyenziswa izibane zesodiyam ephezulu, izibane zentsimbi, kunye nezibane ze-incandescent. Le mithombo yokukhanya ikhethwe ngokwendlela iliso lomntu elisebenza ngayo ekukhanyeni, kwaye izityalo zinendlela eyahlukileyo yokufunxa, ekhokelela ekubeni amandla amaninzi kwimithombo yokukhanya yendabuko ichithwe, kwaye ukukhuthaza ukukhula kwezityalo akubonakali ngokwaneleyo.
I-Chlorophyll yokufunxwa kwembonakalo yegophe lamehlo oluntu
I-Spectra yokukhuthaza ukukhula kwezityalo ikakhulu ijolise ekukhanyeni okuluhlaza okwesibhakabhaka kwi-450nm kunye nokukhanya okubomvu kwi-660nm. Iimfuneko zokulinganiswa kokukhanya okubomvu noluhlaza okwesibhakabhaka kwizityalo ezahlukeneyo kunye namanqanaba okukhula okuhlukahluka kwezityalo nawo ahlukile. Ngenxa yokubonakala kwayo kweplastikhi, ii-LEDs zinokuyilwa ngokoluhlu oluthile lwezityalo ezahlukeneyo.
Uthotho lweShineOnokukhanyisa kulungiso lweziqhamo kuphuhlise iimveliso ezijolise kuyo ngokusekwe kwiintlobo ezahlukeneyo zezityalo.
Ukukhanya okuphezulu kokukhanya kokukhanya kweemveliso zeemveliso ezibonakalayo.
Ukuhlengahlengiswa kuninzi lwezicelo zokukhanya kweziqhamo.
Ukongeza, ukulungelelanisa iimfuno zokukhula kwezityalo ngamehlo abantu, i-ShineOn ibonelela ngombala ofanelekileyo wokutyala amakhaya amancinci.
I-ANSI 3500K 7-inyathelo, i-Ra90, inokuhlangabezana neemfuno zemihla ngemihla zokukhanyisa, ngaxeshanye, i-2.1umol / J photosynthetical photon flux ufanisi kunye nomgangatho ofanelekileyo obomvu-bhlowu unokuhlangabezana neemfuno zokukhula kwezityalo.
I-ShineOn izibophelele kuphuhliso lwemithombo yokukhanya ephezulu yokulima kunye nokubonelela ngesisombululo esipheleleyo sokwazisa kunye nokusetyenziswa kwe-LED kwicandelo lokukhanya kweziqhamo.
Ixesha Post: Oct-10-2020